China Spot light PL608 စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ။ Eurborn
အလင်း PL608 အစက်အပြောက်
Integral CREE LED (6pcs) package နှင့်တပ်ဆင်ထားသည့် Bar ၏အလူမီနီယံမျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည့် projector ပါ ၀ င်သည်။ ဖန်ခွက်၊ IP67 ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောပစ္စည်းနှင့် ၁၀/၄၀ ဒီဂရီရောင်ခြည်ရောင်ခြည်များတပ်ဆင်ထားသည်။ အလင်းအရင်းအမြစ်မှစက်မှုအဆစ်များမှရေထိတွေ့မှုမှကာကွယ်မှုကိုသေချာစေသည်။ အသေးစား / အလတ်စားသစ်ပင်များ၏အလင်းရောင်၊ အဆောက်အ ဦး အပြင်ဘက်၊ ပါဝါ6* 1W နှင့်အတူအသေးစားလူမီနီယံအစက်အပြောက်အလင်းအိမ်။ ပေါ့ပါးပြီးတပ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီးနေရာများစွာတွင်တပ်ဆင်ရန်သင့်လျော်သည်။ ပန်းခြံငယ်များ၊ ဥယျာဉ်များ၊ မြက်ခင်းများ၊ အိမ်နောက်ဖေးများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ အရောင်အပူချိန်ကိုမြင်ကွင်း၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ မျက်နှာပြင်မီးခိုးရောင်နှင့်လက်မှုပညာ၏အပြောင်းအလဲသည်၎င်းကိုစက်မှုဒီဇိုင်းပုံစံဖြစ်စေသည်။ ဤဥယျာဉ်မီးပန်းတိုင်ကို RGB သို့မဟုတ် DMX RGB ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ဥယျာဉ်ပရောဂျက်တွင်ထည့်သွင်းထားသည့်ရှုခင်းတစ်ခုလုံးကိုပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သစ်ပင်အလင်း၊ အပြင်ဘက်အိမ်မီး၊ စက်မှုပြင်ပအလင်း၊ မီးအလင်းရောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
LED အလင်းအရင်းအမြစ် High Power LED
အလင်းအရောင် RGB၊ CW.WW၊ NW၊ အနီရောင်၊ အစိမ်း၊ အပြာ၊ ပယင်း
Ottics S1O ° / F4O °
ပါဝါ 6x1 W (3x1W)
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ N / A
ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် -20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ~ + 45 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ပျမ်းမျှသက်တမ်း 5O, OOOHrs
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (optional) N / A
လျှောက်လွှာများ အတွင်းပိုင်း၊ အပြင်ပိုင်း၊ La ndsca pe
မော်ဒယ်နံပါတ်။ LED အမှတ်တံဆိပ် အရောင် Beam ခွေးရူး input ကို ဝါယာကြိုး Cable ပါဝါ Luminous Flux အစားအသောက် DrillSize
PL608 အခမဲ့ CW, WW, NW၊ အစိမ်းရောင်၊ အပြာ၊ ပယင်း S10 / F40 စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိ 350mA စီးရီး 3M 2X0.75mm²ကေဘယ်လ် 6W 500LM 93X70X112 N / A
PL608D အခမဲ့ CW, WW, NW၊ အစိမ်းရောင်၊ အပြာ၊ ပယင်း S10 / F40 စဉ်ဆက်မပြတ်ဗို့အား 24VDC စင်ပြိုင် 3M 2X0.75mm²ကေဘယ်လ် ၆.၅ ဝ 500LM 93X70X112 N / A
PL608RGB အခမဲ့ 2R + 2G + 2B S10 / F40 စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိ 350mA စီးရီး 2x3M 4X0.5mm²ကေဘယ်လ် 6W N / A 93X70X112 N / A
PL608DMX-RGB အခမဲ့ 2R + 2G + 2B S10 / F40 စဉ်ဆက်မပြတ်ဗို့အား 24VDC DMX Controller စင်ပြိုင် 1.1M 4X0.5mm²ကေဘယ်လ် ၆.၅ ဝ N / A 93X70X112 N / A
PL608DMX-RGB အက်ဒီဆင် RGB (ရောင်စုံ) S10 / F40 စဉ်ဆက်မပြတ်ဗို့အား 24VDC DMX Controller စင်ပြိုင် 1.1M 4X0.5mm²ကေဘယ်လ် ၆.၅ ဝ N / A 93X70X112 N / A
PL608DMX-RGBW အက်ဒီဆင် RGBW (ရောင်စုံ) S10 / F40 စဉ်ဆက်မပြတ်ဗို့အား 24VDC DMX Controller စင်ပြိုင် 1.1M 4X0.5mm²ကေဘယ်လ် ၆.၅ ဝ N / A 93X70X112 N / A
built အတွက် DMX ဒီကုဒ်ဒါ * IES ဒေတာအထောက်အပံ့။
ရှေ့သို့ In-Ground GL268
နောက်တစ်ခု: အလင်း PL026 အစက်အပြောက်
ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်ကုန်ပစ္စည်းများအားလုံးသည်အညွှန်းကိန်းစစ်ဆေးမှုအမျိုးမျိုးပြီးသွားမှသာထုပ်ပိုးပြီးတင်ပို့မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ထုပ်ပိုးမှုကိုလျစ်လျူရှု။ မရသောအရေးကြီးဆုံးအပိုင်းလည်းဖြစ်သည်။ သံမဏိမီးခွက်များသည်အလွန်လေးလံသောကြောင့်ထုတ်ကုန်များကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်သက်ရောက်မှုများသို့မဟုတ်ပြန်တက်ခြင်းများမှကောင်းစွာကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်အတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်အခက်ခဲဆုံးသွပ်သေတ္တာကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ Oubo ၏ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီသည်ထူးခြားသောအတွင်းပိုင်းသေတ္တာတစ်ခုနှင့်ကိုက်ညီပြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ပစ္စည်းများ၏သဘောသဘာဝ၊ အခြေအနေနှင့်အလေးချိန်အရသက်ဆိုင်ရာထုပ်ပိုးခြင်းအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပြီးကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုစီအကြားကွာဟမှုမရှိဘဲကုန်ပစ္စည်းကိုပုံသေသတ်မှတ်ထားသည်။ သတျတော။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်ထုပ်ပိုးမှုမှာအညိုရောင်မြှင့်ထားသောအတွင်းပိုင်းသေတ္တာနှင့်အညိုရောင်မြှင့်ထားသောအပြင်ဘက်သေတ္တာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဖောက်သည်သည်ကုန်ပစ္စည်းအတွက်တိကျသောအရောင်အကွက်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အရောင်းအဝယ်ကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားထားပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အစောပိုင်းအဆင့်တွင်သက်ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ပြင်ပသံမဏိမီးခွက်များကိုကျွမ်းကျင်သောထုတ်လုပ်သူအဖြစ်၊ Eurborn တွင်စမ်းသပ်ခန်းများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့်မြင့်ပြီးပြည့်စုံသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများအများအပြားရှိပြီးသားဖြစ်သောကြောင့်ပစ္စည်းကိရိယာများအားလုံးကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပြီးထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်ပလူပုဂ္ဂိုလ်များကိုအား ထား၍ မရပါ။ ပစ္စည်းအားလုံးသည်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ကုန်နှင့်သက်ဆိုင်သောစစ်ဆေးမှုများကိုအချိန်မီညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
Eurborn အလုပ်ရုံတွင်ကျွမ်းကျင်သောစက်ကိရိယာများနှင့်လေပူအပူပေးသောမီးဖိုများ၊ လေဟာနယ်ဖယ်ထုတ်စက်များ၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ခရမ်းလွန်စမ်းသပ်ခန်းများ၊ လေဆာအမှတ်အသားများစက်များ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆစမ်းသပ်သည့်အခန်းများ၊ ဆားမှရေမှုန်ရေမွှားစမ်းသပ်စက်များ၊ အမြန် LED ရောင်စဉ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစနစ်များ၊ စမ်းသပ်ခြင်းစနစ် (IES test)၊ ခရမ်းလွန်မီးဖိုနှင့်အီလက်ထရောနစ်စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန်ခြောက်သွေ့သောမီးဖိုစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်သောထုတ်ကုန်တိုင်းအတွက်ပြည့်စုံသောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကိုရရှိနိုင်သည်။
ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီတွင် ၁၀၀% အီလက်ထရောနစ်စံသတ်မှတ်ချက်စစ်ဆေးမှု၊ ၁၀၀% အိုမင်းခြင်းစမ်းသပ်မှုနှင့် ၁၀၀% ရေစိုခံစစ်ဆေးမှုကိုခံယူရမည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာထုတ်လုပ်ခဲ့သောအတွေ့အကြုံများအရထုတ်ကုန်နှင့်ရင်ဆိုင်ရသောပတ် ၀ န်းကျင်သည်ပြင်ပအတွင်းပိုင်းနှင့်မြေအောက်သံမဏိမီးလုံးများအတွက်မိုးလုံလေလုံအလင်းများထက်အဆပေါင်းများစွာအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်သည်။ သာမန်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်မီးခွက်သည်ပြသနာအနည်းငယ်ကိုမတွေ့မြင်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကောင်းစွာသိထားကြသည်။ Eurborn ၏ထုတ်ကုန်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြမ်းတမ်းသောပတ် ၀ န်းကျင်အမျိုးမျိုးတွင်ကြာရှည်တည်မြဲသောအလုပ်လုပ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ခြင်းကိုပိုမိုသေချာစေသည်။ သာမန်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ simulated environment test သည်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပို၍ ခက်ခဲသည်။ ဤကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်သည်ချွတ်ယွင်းသောထုတ်ကုန်များမရှိခြင်းကိုသေချာစေရန် LED မီး၏အရည်အသွေးကိုပြသနိုင်သည်။ အလွှာများစစ်ဆေးပြီးနောက်မှသာ Ober သည်အကောင်းဆုံးကုန်ပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပို့ပေးပါလိမ့်မည်။
Eurborn သည် IP, CE, ROHS၊ အသွင်အပြင်မူပိုင်ခွင့်နှင့် ISO စသည်တို့ကဲ့သို့အရည်အချင်းပြည့်မီသောလက်မှတ်များရှိသည်။
အိုင်ပီအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - International Lamp Protection Organisation (IP) သည်ဖုန်မှုန့်များ၊ အစိုင်အခဲနိုင်ငံခြားအရာ ၀ တ္ထုများနှင့်ရေစိုခံ ၀ င်ရောက်ကျူးကျော်မှုအတွက် ၄ င်း၏အိုင်ပီကုဒ်စနစ်အရမီးအိမ်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။ ဥပမာ၊ Eurborn သည်မြှုပ်နှံခြင်းနှင့်မြေပြင်မီးများ၊ ရေအောက်မီးများကဲ့သို့သောအပြင်ဘက်ထုတ်ကုန်များကိုအဓိကထုတ်လုပ်သည်။ ပြင်ပသံမဏိမီးလုံးအားလုံးသည် IP68 နှင့်ကိုက်ညီပြီးမြေအောက်အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ရေအောက်အသုံးပြုခြင်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ EU CE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများသည်လူသား၊ တိရစ္ဆာန်နှင့်ထုတ်ကုန်များ၏လုံခြုံမှု၏အခြေခံလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်များကိုခြိမ်းခြောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီတွင် CE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရှိသည်။ ROHS အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - ၎င်းသည်အီးယူဥပဒေအရပြဌာန်းထားသောမဖြစ်မနေလိုအပ်သောစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အမည်အပြည့်အစုံမှာ“ လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၌အချို့သောအန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းကိုကန့်သတ်ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်” ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များ၏ပစ္စည်းများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်စံချိန်စံညွှန်းများစံသတ်မှတ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်လူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်ရေးကိုပိုမိုအထောက်အကူပြုသည် ဒီစံ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များ၌ခဲ၊ ပြဒါး၊ ကဒ်မီယမ်၊ hexavalent ခရိုမီယမ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏အခွင့်အရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာကာကွယ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏သမားရိုးကျထုတ်ကုန်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်မူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ရှိသည်။ ISO အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - ISO 9000 စီးရီးသည် ISO (Standardization for International Organization) မှချမှတ်သောနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများအနက်အကျော်ကြားဆုံးသောစံဖြစ်သည်။ ဤစံသည်ထုတ်ကုန်၏အရည်အသွေးကိုအကဲဖြတ်ရန်မဟုတ်ဘဲထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းရှိအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုစံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကုန်ပစ္စည်း၏မီးခွက်သည် SNS316L သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သံမဏိ ၃၁၆ တွင် Mo ပါဝင်ပြီးမြင့်မားသောအပူချိန်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသံမဏိ ၃၀၄ ထက်ချေးသည့်ပစ္စည်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ 316 သည် Cr ၏ပါဝင်မှုကိုအဓိကလျော့ကျစေပြီးနီရဲဓာတ်ပါဝင်မှုကိုတိုးစေပြီး Mo2% မှ ၃% အထိတိုးစေသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏ဓာတုဓာတ်ငွေ့၊ ပင်လယ်ရေနှင့်အခြားပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်သည်။
2. LED မီးအရင်းအမြစ်သည် CREE အမှတ်တံဆိပ်ကိုလက်ခံသည်။ CREE သည်ဈေးကွက်တွင် ဦး ဆောင်နေသောအလင်းရောင်တီထွင်သူနှင့်ဆီမီးကွန်ဒတ်တာထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ Chip ၏အားသာချက်မှာသေးငယ်သောနေရာတွင်စွမ်းအင်ပိုမိုသုံးနိုင်သောဆီလီကွန်ကာဗိုက် (SiC) ပစ္စည်းမှရရှိသည်။ အခြားရှိပြီးသားနည်းပညာများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ထုတ်ကုန်များသည်အပူလျော့နည်းစေသည်။ CREE LED သည်အလွန်စွမ်းအင်ထိရောက်သော flip-chip InGaN ပစ္စည်းနှင့်ကုမ္ပဏီ၏ G ·SIC®အလွှာများကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးမြင့်မားသောနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သော LEDs များသည်အကောင်းဆုံးကုန်ကျစရိတ်ကိုရရှိစေသည်။
3. ဖန်သည်ပိုးသားဖန်သား + ပိုးသားမျက်နှာပြင်၏အစိတ်အပိုင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ဖန်အထူသည် 3-12mm ဖြစ်သည်။
၄။ ကုမ္ပဏီသည်အပူစီးကူးမှုနှုန်းသည် 2.0WM / K အထက်တွင်ရှိသောမြင့်မားသောလျှပ်ကူးအလူမီနီယံအလွှာများကိုအမြဲတမ်းရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အလူမီနီယမ်အလွှာများကို LEDs အတွက်တိုက်ရိုက်အပူဓာတ်ပစ္စည်းများအဖြစ်အသုံးပြုပြီး၎င်းသည် LEDs ၏သက်တမ်းနှင့်အနီးကပ်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ မြင့်မားသောအပူစီးကူးနိုင်သည့်လူမီနီယမ်အလွှာသည်ကောင်းမွန်သော conduction နှင့် heat dissipation နိုင်စွမ်းရှိပြီးမြင့်မားသောအပူလွန်ကဲမှုစွမ်းရည်များလိုအပ်သောထုတ်ကုန်များအထူးသဖြင့် high-power LEDs ဖြစ်သည်။
Pin Spot မီးရောင်
အရေးကြီးမှတ်စု - ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုမ္ပဏီ၏အမည်များပါ ၀ င်သောသတင်းများကို ဦး စားပေးပါမည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဤမေးခွန်းကို "သင်၏မေးခွန်း" နှင့်ထားခဲ့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အရောင်းရုံးခန်း - အခန်း ၇၀၂၊ Zhe Jiang ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအဆောက်အအုံ၊ အမှတ် ၄၃၀ Dongguan ရိပ်သာ၊ Nancheng ခရိုင်၊ Dongguan City, Guangdong Province, China
ဖက်စ်: 86 769 2302 2799
ဖက်စ်: +86 769 8523 2835